Bahrain eVisa | Visa ukuya e-Bahrain kwi-Intanethi | natvisa.com
Isicelo se-Bahrain Visa kwi-Intanethi
Ukuba abahambi banqwenela ukufaka isicelo seBahrain Visa, isicelo esingena ngaphakathi siyanikezelwa yi-Kingdom of Bahrain Ministry of Interior. Iimfuneko zilula. Ukufaka isicelo se-visa ye-Bahrain, umntu kufuneka abe ngaphandle kwe-Bahrain. Ixesha lokuhlala eBahrain nge-eVisa liyahluka phakathi kweeveki ezimbini kunye neenyanga ezintathu, kwaye kuxhomekeke kubume bendwendwe. I-eVisa ayinakusetyenziselwa ukwenza imisebenzi e-Bahrain. I-Visa ye-Bahrain ineemeko ezithile kwaye kufuneka zifundwe ngaphambi kokugcwalisa isicelo.
Iindidi zeBahrain Visa
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli 90 Days Ukufikelela kwiintsuku ezingama-30 multiple Faka isicelo ngoku
Ukufumana i-eVisa eBahrain, kukho amaxwebhu aliqela ekufuneka uwanikezele. Phakathi kwezona zinto zibalulekileyo ikopi yomenzi-sicelo ipasipoti evumelekileyo. Abaphethe iipasipoti zaseIndiya kufuneka banikeze ikopi eyongezelelweyo yephepha lokugqibela lencwadana yokundwendwela. Ukongeza koku, omnye kufuneka abonelele a Ikopi yetikiti labo lokubuyela.
Abo bacwangcisa ukutyelela eBahrain kufuneka babonelele ngobungqina bendawo yokuhlala yabo. Oku kunokubandakanya a ikopi yokubhukisha ihotele; imotele, indlu yabahambi okanye nayiphi na enye indawo abakhethileyo ukuhlala kuyo. Kwimeko yokuba bahlala nesalamane okanye umhlobo, baya kufuneka banike ikopi yabo Ukuprintwa kweCPR Reader yabo.
Abafakizicelo kufuneka babonelele ubungqina babo isiteyithimenti sezemali kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Le ngxelo kufuneka ibhalansi ilingane ne-800 USD. Kwimeko apho unokuhambahamba ngokuxhomekeka kuwe, kuya kufuneka ubonise ingxelo yezemali ebonisa ubungqina bokuba unokuzixhasa wena neqabane lakho.
Ukungena kwiZibuko kunye neMfuno zokuNgeza
Abahambi kufuneka ngena kwi-Bahrain Airport. Le Visa ayinakusetyenziselwa ukungena kweli lizwe ngeKing Fahad Cwayway.
Umfaki-sicelo kufuneka aqinisekise ukuba sukuthatha umsebenzi ohlawulelweyo ngexesha lotyelelo lwabo kwilizwe.
Onke amaxwebhu abonelelwa ngumenzi wesicelo kufuneka achaneke kwaye asemthethweni.
Iinkcukacha zeNkqubo ye-Bahrain Visa
Kutheni ufuna iTVisa abakhenkethi eBahrain?
Abahambi abaninzi banokufuna ukuphonononga iBahrain. Inyathelo lokuqala lesicwangciso sokuhamba usiya kwilizwe langaphandle kukufumana i-visa yokuhamba yelo lizwe. Eli lelinye lawona maxwebhu abaluleke kakhulu oza kuyidlulisa kwabasemagunyeni. Ukufumana iVisa yabaKhenkethi ukuya eBahrain yindlela esemthethweni yokungena kwimimandla yelizwe langaphandle. Ngo-Okthobha ka-2014, iSebe Lezangaphakathi le-Bahrain (Iipasipoti, ubuzwe kunye neMicimbi yabahlali) yavumela inkqubo ye-eVisa eyenza ukuba amazwe ehlabathi afumane i-visa kwi-intanethi.
Amanyathelo okufaka isicelo kubakhenkethi eVisa
Ukufumana i-eVisa yabakhenkethi yenziwe yalula kwaye yalula. Kukho amanyathelo ama-3 alula omele uwalandele ukufumana i-eVisa yoKhenketho eBahrain.
Gcwalisa iFom: Kuya kufuneka uqale ngokuzalisa ifomu lesicelo kwi-eVisa yakho. Njengoko yonke inkqubo ikwi-Intanethi, awunyanzelekanga ukuba uchithe ixesha ulinde emgceni wefom. Ungayifumana le fomu nakweyiphi na iwebhusayithi karhulumente. Gcwalisa lonke ulwazi ngokuchanekileyo nangokucacileyo.
Ungeniso lwamaxwebhu: Nje ukuba ugcwalise iphetshana, iwebhusayithi iya kukucela ukuba ubonelele ngamaxwebhu askenyo. Kuya kufuneka ubenawo onke amaxwebhu aceliweyo. Ukuskena la maxwebhu kufuneka kucace ukuze amagosa abone ulwazi alufunayo.
Yenza intlawulo: Inqanaba lokugqibela lokugqibezela inkqubo ngokwenza intlawulo. Kuya kufuneka ube nekhredithi esebenzayo okanye ikhadi lebhanki kunye nawe okanye ube neakhawunti kwi-PayPal. Ngazo zonke ezi ndlela zokuhlawula onakho, ungayenza lula intlawulo. Nje ukuba amaphepha onke asetyenzisiwe, uya kufumana i-eVisa yakho ngeentsuku ezimbalwa, eza kukuvumela ukuba ungene eBahrain.
Imiyalelo yabahambeli Ukufaka isicelo seBahrain eVisa
Abakhenkethi abafaka izicelo zeBahrain eVisa kufuneka balandele imiyalelo ethile. I-Bahrain eVisa xa sele ikhutshiwe isebenza iintsuku ezingama-30 emva kokufika kwakho. I-Visa ikwavumela ukungena kwamangenelo amaninzi, oko kukuvumela ukuba uhambe kunye neqabane phantsi kwe-visa enye. Xa ufaka isicelo se-Visa eBahrain, umfaki-sicelo kufuneka abe ngummi ngaphandle kwe-Kingdom of Bahrain.
Abahambi banokungena kwintsimi yelizwe lonke kwisikhululo senqwelomoya sezizwe. I-eVisa ayikuvumeli ukuba ungene kwiKing Fahad Caseway. Kuya kufuneka unikezele ngetikiti lokuhamba eliqinisekisiweyo elisuka eBahrain. Ii-visa zikhutshwa kube kanye. Ke ngoko kuya kufuneka ufake isicelo sevisa ukuba i-visa yakho yangaphambili iphelelwe. Abafaki-zicelo kufuneka bachaze injongo yokutyelelwa kwabo ngokucacileyo kumagosa, okt, amashishini, utyalomali, okanye ukhenketho. Akukho kwimeko yokuba umhambi avumeleke ukuba ahlawulwe xa behlala kweli lizwe.
Amaxwebhu ayimfuneko ukuze uzuze i-Bahrain Visa ekwi-Intanethi
Abemi bazo zonke izizwe kufuneka bangenise la maxwebhu alandelayo xa besenza isicelo seVisa abakhenkethi:
Ifoto ecacileyo yepaspoti yomenzi-sicelo. Ukuba umenzi-sicelo ngumnini wepasipoti yaseNdiya, kunye nefoto yepasipoti yabo, kuya kufuneka bangenise ikopi yephepha lokugqibela lokundwendwela.
Ikopi yendawo yokufaka isicelo yomhambi, ekufuneka ibandakanye itikiti labo lokubuya eBahrain.
Abenzi-sicelo kuya kufuneka bangenise ubungqina bendawo ababehlala kuyo. Oku kunokubandakanya ukubhukishwa kwehotele, imotele, indlu yeendwendwe okanye indawo okhetha ukuhlala kuyo. Ukuba uthe wagqiba kwelokuba uhlale nezihlobo zakho okanye abahlobo bakho kuya kufuneka unikeze ikopi yokushicilelwa kweCPR Reader yabo.
Ikopi yengxelo yabo yebhanki kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Qinisekisa ukuba ibhalansi yokuphela kufuneka ibe nemali elingana ne-800 USD. Oku kukuqinisekisa ukuba abahambi banemali eyaneleyo yokuzixhasa.
Ukufaneleka ngokubanikwa kweBahrain Visa ekwi-Intanethi
Ilizwe ngalinye, lokukhusela iimfuno kunye nokukhuseleka kwabemi balo linemithetho ethile kunye nemigaqo emayilandelwe, ukufumana imvume yokungena kwilizwe labo. Ngendlela efanayo, kukho iikhrayitheriya umntu anokuzalisa ukuze afumane i-Bahrain Visa ekwi-Intanethi. Rhoqo ngenxa yokunqongophala kwamaphepha okanye ulwazi olungelulo, isicelo sabo se-visa siyaliwe. Le ilandelayo yeminye yemigaqo ekufuneka uyithobele ukuze ufaneleke ukuba ufumane visa. Kuya kufuneka ube nencwadana yokundwendwela esebenzayo. Xa usenza isicelo sevisa, iphepha-mvume lakho lokundwendwela kufuneka lisebenze kangangesithuba seenyanga ezintathu. Yakuba ikhutshiwe imvume, ungahlala kweli lizwe iintsuku ezingama-3. Thumela elo xesha, kufuneka ufake isicelo kwakhona se-visa.
Ukuba sele unayo i-visa ye-Bahrain, kuya kufuneka ke ulinde ukuba iphelelwe. Ukuba sele iphelelwe, kuya kufuneka uyise kwabasemagunyeni. Ngale ndlela abasemagunyeni baya kwaziswa ngenani lotyelelo olwenzileyo kwilizwe. Kuya kufuneka unike ubungqina obuya kukuthatha njengomntu ongayingozi kwilizwe. Akufuneki nakuphi na ukwaphula ukhuseleko okanye imigaqo nemigaqo yelizwe. Ukuba unembali yobundlobongela okanye irekhodi lamapolisa, akunakuthathwa njengakulungeleyo ukunikwa visa.
Wonke umntu ofuna ukungena eBahrain udinga i-visa, ngaphandle kwabemi be-Gulf Cooperation Council (Kuwait, Oman, Saudi Arabia, kunye ne-United Arab Emirates). Uninzi babahambeli abafaka isicelo sevisares yeBahrain baxhaswa. Abahambi banokuthi baxhaswe ngemali yi-Bahrain firm, okanye iarhente yokuhamba okanye ihotele. Uya kucelwa ukuba ubonelele lonke ulwazi malunga nenkxaso-mali. Abantu bakhetha iivisa ezingasetyenziswanga. Nangona kunjalo, zihlala zithintelwe kwizizwe ezithile, amaqela, nabantu abatyelele ilizwe ngeenjongo ezithile.
Utyelelo lwe-eVisa kunye ne-GCC eVisa alugcinwa. Ithetha ntoni le nto?
I-Visa engagadwanga luluhlobo lwe-visa onokuthi ufake isicelo kuyo, kwaye ufumane ngokwakho. Awudingi mxhasi wokufaka isicelo kwiNdawo yeVisa kunye neGCC eVisa. Logama nje uvumelekile ukuba ungasifaka isicelo seevisa ezinjalo, ungayenza ngokwakho ngaphandle komxhasi.
Yintoni endiyifunayo ukwenza isicelo se-eVisa?
Ukufaka isicelo sokundwendwela okanye i-visa ye-GCC nge-Natvisa, kufuneka ube nencwadana yokundwendwela esebenzayo, kunye nekhadi lakho letyala okanye ikhadi letyala olisebenze kwiintlawulo ezikwi-intanethi. Ipasipoti yakho kufuneka okungenani ibe neenyanga ezintandathu isemthethweni kuyo, kwaye uya kudinga ikhadi lakho letyala / letyala ukuhlawula umrhumo wesicelo ukwenzela ukuba kungeniswe i-visa yakho ukuze ilungiswe.
Ndazi njani ukuba i-eVisa yam isasebenza ekuhambeni eBahrain?
Ukuba ufumene i-visa ngo-Natvisa, unokuya kwiakhawunti yakho ubone imeko yevisa yakho. Kwaye ukuba awuzange ubhalisele iakhawunti xa ufaka isicelo, kufuneka unikezele ngenombolo yakho yencwadana yokundwendwela kunye nenombolo yesalathiso oyifumene xa wawusenza isicelo.
Kwenzeka ntoni xa izicelo zingavunywanga?
Nangona izicelo ezingavunyelwanga zenza ipesenti encinci, ziyenzeka. Ukuba ufake isicelo se-Bahrain eVisa kwaye emva kokulungisa i-visa, ayivunyelwanga, kuya kufanele ukuba uye kwindlu yozakuzo yase-Bahrain okanye kwi-ofisi yobameli ukuze uphinde ufake isicelo. Kuyenzeka ukuba ukhatywe ngenxa yokuba ungafanelekanga kwi-eVisa.
Ukufaka isicelo se-eVisa akuphumelelanga. Ndingayifumana imali yam?
Ukuba isicelo sakho seBahrain eVisa asiphumelelanga, umrhumo wakho wesicelo ubungayi kuhlawulwa. Umrhumo wokufaka isicelo yimali yokuqhubekisela ukusebenza kwivisa. Isiphumo sokulungisa i-visa yakho inokuba sisigqibo okanye ukwala. Akukho ziqinisekiso. Ke, ukuba isicelo sakho asiphumelelanga kwaye unqwenela ukufaka isicelo kwakhona, kuya kufuneka uhlawule enye imali yokuhlawula.
Ndingenza ntoni ukuba ndenze impazamo kwisicelo sam?
Ukuba wenze impazamo kwisicelo sakho kwaye uyaqonda ukuba sele wenze intlawulo, unganxibelelana nenkxaso yabathengi beNatvisa ukuba ubazise. Ungaqala esinye isicelo ukuba awukwazi ukuya kwinkxaso yabathengi, kodwa isicelo esitsha siya kubiza imali. Eyona nto intle ekufuneka uyenzile kukujonga kwakhona ulwazi olungenisayo.
Yintoni endiyenzayo ukuba ndiphulukana nenombolo yam yereferensi yesicelo?
Udinga inombolo yakho yokwazisa ukujonga imeko yesicelo sakho se-Bahrain eVisa. Ukuba ulahlekelwe yile nombolo, inkxaso yabathengi bakaNatvisa inokukunceda ufumane inombolo yakho oyisebenzisayo. Kufuneka unikezele ngolwazi olunjengegama lakho, inombolo yepasipoti, ubuzwe, umhla wokuzalwa, kunye nomhla wokuphelelwa kwepasipoti. Inkxaso yomthengi iya kukubuyisela inombolo yereferensi.
Ndihlala ixesha elingakanani e-Bahrain?
Ukundwendwela e-Bahrain eVisa kusebenza iintsuku ezingama-30, kodwa uvunyelwe ukuhlala eBahrain kangangeentsuku ezilishumi elinesine (14). Nangona kunjalo, ukuba ungumIreland okanye iBritane, unokuhlala iinyanga ezintathu (3). Nge-GCC eVisa, ungahlala iintsuku ezintathu (3) okanye iintsuku ezisixhenxe (7). Ukuba unqwenela ukuhlala ixesha elide e-Bahrain, kuya kufuneka undwendwele i-NPRA ukufaka isicelo sokongezwa.
Ndingayifumana njani i-Visa?
I-eVisa yakho ayizukubekwa isitampu ngaphambi kokuba uye eBahrain. Yakuba ivunyiwe imvume, ungaya eBahrain, kwaye xa ufika, unokubonisa nje ipasipoti yakho kwigosa elilawula ipasipoti. Nje ukuba bajonge ulwazi lwencwadana yakho yokundwendwela kwinkqubo, baya kukukhuphela IVisa yakho. Qiniseka ukuba ipaspoti ohamba nayo yipaspoti enye oyifakileyo.